अध्यारो हटाएका कुलमान भन्छन्ः अबको हिउँदमा लोडसेडिङ हुन पनि सक्छ | News Dabali
अध्यारो हटाएका कुलमान भन्छन्ः अबको हिउँदमा लोडसेडिङ हुन पनि सक्छ
August 3, 2017 | 5:55 pm
काठमाडौं । नेपाली जनतालाई अँध्यारोबाट निकालेको सबैभन्दा ठूलो जस पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि परीक्षामा छन् । आगामी हिँउदमा पनि लोडसेडिङ रोक्ने चुनौती उनका सामु छ ।
यद्यपि, लोडसेडिङ रोक्नलाई घिसिङले अघि सारेका योजनाहरुमा विभिन्न खाले अड्चनहरु पैदा भइरहेका छन् । कुनैमा अदालत, कुनैमा संसदीय समिति त कुनैमा आयोजनाका ठेकेदार बाधक बनेका छन् । यसको पछिल्लो कडीका रुपमा नुवाकोटमा बनाउने भनिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट संसदीय समितिको निर्देशनपछि अलपत्र पर्‍यो । सांसदहरुले यसमा घिसिङलाई समेत विवादमा मुछे । के अब फेरि नेपालीहरु अध्यारोमै बस्नुपर्ने दिन आउने हो त ? घिसिङसँग हामीले सोध्यौं:
हिँउदमा फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने चर्चा बजारमा ब्याप्त छ । यसलाई रोक्न प्राधिकरणका तयारीहरु के-के छन् ?
त्यसैगरी सप्लाईमा पनि हामीले दुई वर्षदेखि पेन्डिङ रहेको सोलार प्लान्ट अघि बढायौं । तर यसमा पनि अहिले समस्या आएको छ । यसलाई अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन । निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको सोलारबाट पनि विद्युत खरिद गर्ने सोच बनाएका थियौं । तर, यसको पनि पीपीए हुन सकेको छैन । लाइसेन्स दिने प्रक्रियामै लामो समय लाग्यो । निजी क्षेत्रबाट ८ रुपैयाँदेखि ९ रुपैयाँ ६० पैसासम्ममा विद्युत खरिद गर्ने गरी अघि बढाएका थियौं । ६१ र २५ मोगावाट गरी ८६ मेगावाटबाट बन्ने निजीको पनि अब यो हिउँदसम्ममा सञ्चालनमा आइसक्ने स्थिति छैन ।
भनेपछि तपाईले हात उठाउनुभएको हो ?
खपत घटाउन नसक्ने र उत्पादन पनि ठूलो परिमाणमा बृद्धि गर्न नसक्ने हो भने अब विकल्प भनेको भारतबाट आयात बढाउने मात्रै रह्यो होइन ?
रक्सौल-परवानीपुरको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भइसकेको छ । जुन गतवर्ष प्रयोगमा आएको थिएन । यसबाट ५० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सकिन्छ । तर, भारतीय पक्षसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ । कुशाहा-कटैयाको लाइन पनि तयारी अवस्थामा छ । यहाँबाट पनि थप विद्युत आयात गर्न सकिने स्थिति छ ।
यसअघि नै निर्माण भएको धनगढी-पाली पनि प्रयोगविहीन छ, जसका कारण विभिन्न ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । १० मेगावाट विद्युत आयात गर्नसक्ने यो प्रसारणलाइनको अहिले मर्मत प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।
त्यस्तै टनकपुर-महेन्द्रनगर प्रसारणलाइनबाट पनि थप ४० मेगावाट आयात गर्न मिल्ने बनाउन लागिएको छ । ५० एमबीएको ट्रान्सर्फमर राखेर यसको स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । ढल्केवर सबस्टेशन सम्पन्न भयो भने गत वर्षभन्दा १ सय मेगावाट थप्न मिल्छ । तर, यसमा पनि केही समस्या देखिएको छ । कन्ट्रयाक्टरले काम गर्छु भनेर आएको त छ तर, आवश्यक गतीमा काम हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले बर्दघाट-भरतपुर प्रसारणलाइनको सम्झौता तोडेकाले चिनियाँ कम्पनीले ढल्केबर प्रशारणलाइनमा काम रोकेको हो ?
७ वर्षदेखि त्यो (बर्दघाट-भरतपुर) प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । वन क्लियरेन्स दिन हामीलाई केही समय लागेकै हो । तर, डेढ वर्ष अघि नै वन क्लियरेन्स गर्नका लागि अनुमति दिँदा पनि उसले काम अघि बढाएन । चिनियाँ कम्पनीले नै ठेक्का तोड्छौं भन्यो । हामी पनि हुन्छ भनेर ठेक्का तोडेको मात्रै हो । त्यही कम्पनीले ढल्केबर सवस्टेशनमा केही दिन काम गरेन । फेरि काममा फर्किएको त छ तर, काम अहिले पनि सुस्त गतिमा अघि बढाएको छ ।
गत वर्ष मिटर रिडरमाथि अनुसन्धान र कारवाही अघि बढेको थियो । यसपालि खासै त्यस्तो केही सुनिँदैन । अब त्यस्तो बदमासी पूर्ण रुपमा हटेको हो कि आन्तरिक सुधारमा तपाईंको ध्यान नगएको हो ? कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
गत असोजदेखि नै आन्तरिक सुधारका काम चलाइरहेका छौं । धेरै समय त आन्तरीक सुधारमै लाग्यौं । फागुनमा ट्रेड युनियनको चुनाव भयो, जसका कारण २६ सय कर्मचारीको सरुवालाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । युनियनको चुनाव सकिएसँगै दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, जसले गर्दा फेरि सरुवा गर्न मिलेन ।
गत वर्ष चुहावट नियन्त्रण केही मात्रामा घट्यो । अहिले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले त्यसलाई १८ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिनुभएको छ, के यो सम्भव छ ?
हामीले चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्‍यौं तर, पछिल्लो समय चुनावका कारण त्यसमा तिव्रता दिन सकेका छैनौं । अब पनि चुहावट नियन्त्रण सम्भव छ । मन्त्रीज्यूले भनेजस्तो १८ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । तर, यसको लागि समय लाग्छ ।
राजधानीका केही सडक विस्तार भएका ठाउँमा अझै पनि विद्युतका पोल हटेका छैनन् । अन्तरसरकारी समन्वयमा तपाई चुक्नुभएको त होइन ?
सडकमा पोल देखिन्छन् त्यो म स्वीकार्छु । तर, हाम्रो ढिलाईका कारणले त्यस्ता पोलहरु सडकबाट नसरेका होइनन् । सडक विभागले पोल सार्नलाई आवश्यक ठाउँ दिन सकेको छैन । घरहरु केही काट्नुपर्ने छ, त्यो हुन सकेको छैन । ढलको काम अघि बढेको छैन । यसैले गर्दा रोकिएको हो । तर, हाम्रो कमजोरी छँदैछैन भन्ने पनि होइन । कुनै ठाउँमा हाम्रा कारणले पनि ढिलाई भएको होला । यद्यपि, सबै अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय भएर नै कामहरु अघि बढेका छन् ।साभार अनलाईनखबरबाट